Vaovao - Ahoana no hisafidianana borosy nify ho an'ny ankizy
Betsaka ny ray aman-dreny no mamboly ny fanaon'ny zanany miborosy nify hatramin'ny fahazazany, ka rahoviana no tokony hikorontana nify tsara kokoa ny zanany? Borosy nify inona no tokony hofidiko? Inona avy ireo fitandremana rehefa mifidy borosy nify ho an'ny ankizy? Andao hizara anio: Ahoana ny fisafidianana borosy nify ho an'ny ankizy
Andao hojerentsika ny fotoana nanombohan-jaza nanosotra. Rehefa manodidina ny 2 taona ny zaza dia lava ny nifiny ambony sy ambany. Amin'ity fotoana ity, ny reny mitandrina dia tokony hamboly ny famafana ny zaza ary mividy sahaza ho an'ny zaza. Borosy nify.
Rehefa misafidy borosy nify ho an'ny ankizy ianao, ny zavatra voalohany jerena dia ny fahalemen'ny volon-borosy. Ny borosy nify amin'ilay zaza dia tokony hatao malefaka araka izay tratra. Aza mampiasa volom-bolo antonony sy mafy. Ny volon'ondry antonony sy mavesatra dia hanimba ny fahalemen'ny zaza. Gums.
Ho fanampin'izany, zahao raha kely ny tendron'ny borosy nify ho an'ny zanakao, tsy malalaka loatra, ny malalaka tsy mora mihodina amin'ny vavan'ny zaza raha kely loatra izany, ary ny tendrony kely dia mety ho faritra lehibe kokoa amin'ny miborosy.
Eo koa ny olan'ny tantanana. Satria somary kely ihany ny tanany kely amin'ilay zaza dia aza misafidy famaranana kely loatra fa fantsona somary matevina kokoa, izay hanampy ny zaza hihazona azy rehefa miborosy nify izy. Rehefa mividy borosy nify dia aza hadino ny mitondra ny zanakao hijerena azy.
Avy eo koa ny ora fanoloana borosy nify ho an'ny ankizy. Manolo-kevitra ny hisolo azy ireo isaky ny 3-4 volana, fa tsy miandry mandra-piondrika na hianjera ny volon-nify. Mazava ho azy fa raha mibontsina na milatsaka ao anaty 3 volana ny volon-nify, avy eo soloina avy hatrany.